Ngubani okuncedayo kwimeko yomthetho wolwaphulo-mthetho? | Law & More B.V.
Kananjalo kunokwenzeka ukuba ujongane nomthetho wolwaphulo-mthetho ngokwembono 'yexhoba'. Kule mihla sithenga izinto ezininzi nge-intanethi. Ngokwesiqhelo konke kuhamba kakuhle kwaye ufumana oko uku-odoleyo. Ngelishwa, ngamanye amaxesha kuyonakala: ubhatale imali eninzi kwizinto ezithile ezinje ngomnxeba okanye ilaptop, kodwa umthengisi akazange azise iimpahla kwaye akazimiselanga kwenza njalo. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba ufuna ukwazisa ukuba ziphi izinto zakho, umthengisi akakho ndawo. Kwimeko apho unokuba lixhoba lolwaphulo-mthetho.
Kwiimeko apho udibana nomthetho wolwaphulo-mthetho ngengozi, kuyacetyiswa ukuba unxibelelane negqwetha elichaphazelekayo Law & More. Wonke umcimbi okwimeko yomthetho wolwaphulo-mthetho unganobungqwabalala kwaye iintshukumo kwiinkqubo zolwaphulo-mthetho zinokulandela ngokukhawuleza. Ku- Law & More Siyaqonda ukuba izenzo zomthetho wolwaphulo-mthetho zinokuba nefuthe elikhulu kubomi bakho yiyo loo nto sigxile ekusombululeni ingxaki yomthengi ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Amagqwetha olwaphulo-mthetho at Law & More Kuyonwabele ukukunikezela ngenkxaso yezomthetho kwezi ndawo:
Phantsi kweemeko ezithile unokuziva unenkani, umzekelo xa uthenga impahla kwi-Intanethi, uhlawule imali eninzi ngayo kwaye akazange ayifumane, ngaphandle kweempawu zomthetho zetyala lolwaphulo-mthetho. Ukuze ukwazi ukuba isityhutyha lulwaphulo-mthetho ngokwasemthethweni, kufuneka kubekho ubuxoki okanye ubuxoki obusetyenziswa ngumthengisi ukuthengisa into. Is Scam sichazwa ngokusemthethweni njengokuhambisa omnye umntu ukuhambisa imali kunye neempahla, ngaphandle kwenjongo yokuzisa nantoni na ngembuyekezo. Ngaba unomdla wokuba singenza ntoni? Nxibelelana nabameli bethu. Law & MoreAmagqwetha aneendlela zawo kwaye anokuvavanya imeko yakho kunye nezinto onokuthi ukhethe kuzo.